Iko kuchinjisa kune omnichannel kutengesa kuri pachena, kwazvino kuchitsigirwa nekufamba kwaNike kutengesa pane ese maAmazon ne Instagram. Nekudaro, iyo switch yekuyambuka-chiteshi commerce haisi nyore. Vatengesi nevatengesi vanonetseka kuchengetedza ruzivo rwechigadzirwa rwakaenzana uye rwakaringana pamapuratifomu ese - zvakanyanya zvekuti 78% yevatengesi havakwanise kuenderana nezvinodiwa nevatengi zvekujekesa. 45% yevatengesi nevatengesi varasikirwa ne $ 1 + mil mumari nekuda kwematambudziko
Iyo Nyowani Huru Chiitiko cheKusimudzira Kushambadzira - neMienzaniso
Chipiri, Kurume 10, 2015 Svondo, October 4, 2015 Jeff Foster
Ndinofanira kutanga ndati usarase Douglas Karrmharidzo yekushambadzira kwekusimudzira kuSocial Media Kushambadzira Nyika! Chii chinonzi Influencer Kushambadzira? Chaizvoizvo, zvinoreva kugutsikana vanhu vane hunyanzvi, mabloggi kana vanozivikanwa vane hukuru hutevera kusimudzira zita rako pamaakaundi avo epamhepo. Sezvineiwo ivo vaizozviitira mahara, asi chokwadi ndechekuti iwe unobhadhara kutamba. Uyu musika uri kukura uye kudzoka kunogona kuburitsa yako hombe budiriro huru kana yaitwa
Chii chinonzi Slogan? Masogani eMhando dzakakurumbira uye Dzidziso yavo
Mugovera, December 13, 2014 Chishanu, December 12, 2014 Douglas Karr
At Highbridge, sirogani yedu ndeyekuti Isu tinobatsira makambani kusangana nezvaanogona kushambadzira. Inoenderana neakasiyana masevhisi atinopa - kubva pakubvunza zvigadzirwa, kusvika pakuvandudza zvemukati, kusvika pakushambadzira kwepamhepo ... zvese zvatinoita ndezvekuona mapundu mumazano uye kubatsira makambani kuzadza iwo maburi. Hatina kusvika pakuita kuti zvizivikanwe, kugadzira vhidhiyo yehutachiona kana kuwedzera jingle… asi ini ndinoda meseji yainotumira. Chii